Iingcali zaseTshayina zilawula ukwandisa i-RAM kunye ne-SSD yeApple Silicon | Ndisuka mac
U-Apple akayithandi loo nto unako tinker kakhulu kwizixhobo zakho. Hayi kwinqanaba lomsebenzisi, ngubani ongatshintshi ibhetri elula ye-iPhone, kwaye ayenzi lula kubuchwephesha, abanobunzima bokulungisa isixhobo "esenziwe eCalifornia", ngaphezulu kwazo zonke iiMacs.
Kwaye entsha I-Apple Silicon ziyaqhubeka kulo mgca. Akukho meko yokwandisa i-RAM yakho, okanye ukugcinwa kwakho kwe-SSD. Kwithiyori, kuba kubonakala ngathi e-China sele beyiphumezile. Ndiyathemba ukuba bayigqibelele le ndlela, kwaye bathumele izifundo kwi-YouTube ukuba zenziwa njani. Ngaphezulu kweyodwa oya kuzama, ngokuqinisekileyo.
Njengoko kubonwe kwiinethiwekhi ezahlukeneyo zaseTshayina, abanye oochwephesha abavela kwelo lizwe bakwazile i-actualizar Ukugcinwa kwe-RAM kunye ne-SSD ye-Apple Silicon entsha, ecebisa ukuba ixesha elitsha leekhompyuter ezisekwe kwi-Mac ze-M1 zinokuba bhetyebhetye kunokuba bebecinga njalo.
Iingxelo ezivela kubuchwephesha bolondolozo abakwazanga ukwandisa i imemori kunye ukugcinwa yeeMac M1s ziqale ukujikeleza kwimithombo yeendaba zaseTshayina kule mpelaveki, kodwa ngoku iingxelo zamazwe aphesheya sele ziqalisile ukucacisa imeko.
1 Ukwandisa i-RAM kunye ne-SSD ye-Apple Silicon kunokwenzeka
2 Inkqubo inzima kwaye iyingozi
Ukwandisa i-RAM kunye ne-SSD ye-Apple Silicon kunokwenzeka
Amathuba okonakalisa i-motherboard xa i-desoldering iphezulu kakhulu.
Ochwephesha beekhompyuter kwiGuangzhou, China, bafumanise ukuba kunokwenzeka ukwahlula i-ram webhodi yomama yeApple Silicon kunye nayo Imodyuli ye-SSD kwakhona, kwaye ubeke endaweni yazo izinto ezinobungakanani obuphezulu, ezaziwa ngokuchanekileyo yi-macOS, ngaloo ndlela kwandiswe amandla omatshini.
Njengobungqina, inani elikhulu lemifanekiso lipapashiwe kwi-intanethi ebonisa inkqubo yokwandisa imodeli esisiseko iM1 MacBook Air ene-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina, kuyenzeka ukuba ine-16 GB ye-RAM kunye ne-1 TB ye-SSD , isebenza ngokugqibeleleyo emva kotshintsho kwi Imac enkulu enkulu.
Izinto ze-RAM kunye ne-SSD kwii-Mac M1 ze-Apple zezi Iisadados Kwibhodi yomama, eyenza ukuba inkqubo ibenzima kakhulu, kwaye kukho ingxelo yokuba kunokwenzeka ukuba ayizukulingana kakuhle. Olu hlaziyo lungavumelekanga ngokungekho mthethweni ngokuqinisekileyo lwaphula iwaranti ka-Apple.
I-Apple ikwenze kwaba nzima kubasebenzisi ukuba bahlaziye iiMacs zabo kule minyaka idlulileyo. Kubonakala ngathi nge-Apple Silicon olu luvo lwaludityaniswa ngakumbi, nazo zonke izinto zekhompyuter zeMac M1 zidityaniswe ngokwasemzimbeni. Ithuba lokuphucula imemori kunye nokugcinwa kweMac M1, nangona ukwinkqubo Ingenabungozi kwaye iyingozi, kubonakala ngathi yinto ebalulekileyo kunye nethemba lokufumanisa.
Inkqubo inzima kwaye iyingozi
Apha ungabona iimodyuli ezimbini ze-512 GB ze-SSD ezithatha indawo ye-128 GB.
Ngenxa yobunzima bokuphucula i-RAM okanye i-SSD, kusenokwenzeka ukuba phantse bonke abanini be-M1 kusafuneka baxhomekeke kwimemori kunye nasekuqwalaselweni kokugcina abakukhethileyo ngexesha lokuthenga, ngohlaziyo olunqunyelwe kumbalwa 'abakhenkethiNangona kuye kwacetyiswa ukuba iM1 Mac memory kunye nokugcinwa kwezinto eziseAsia ziya kufumaneka ngeendlela ezingekho semthethweni.
Ubuncinci ngoku abanini beApple Silicon banokuba nethemba lokuba le nkqubo yokwandiswa iya "kulungiswa" kwaye akukho xesha inokwenzeka ukwazi ukwandisa i-RAM okanye i-SSD ye-Mac yakho entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Iingcali zaseTshayina zilawula ukwandisa i-RAM kunye ne-SSD yeApple Silicon
I-beta ye-TvOS ibonisa imikhondo malunga ne-Apple TV entsha kwi-120Hz